Vaovao - Ao anatin'ny tetik'asa ChemCycling, BASF dia nanambola vola 16 tapitrisa euro ho an'ny orinasan-tsolika pyrolysis pyrolysis Pyrum
BASF SE dia nanambola 16 tapitrisa euro tao amin'ny Pyrum Innovations AG, orinasa iray manokana momba ny teknolojia pyrolysis kodiarana fako, manana ny foibeny ao Dillingen / Saarland, Alemana. Amin'ity fampiasam-bola ity, ny BASF dia hanohana ny fanitarana ny orinasa pyrolysis Pyrum ao Dillingen ary ny fampiroboroboana bebe kokoa ny teknolojia.
Pyrum dia miasa amina orinasa pyrolysis ho an'ny kodiarana farany, izay afaka manamboatra kodiarana hatramin'ny 10.000 taonina isan-taona. Amin'ny faran'ny 2022, andalana famokarana roa no hanampy ho an'ny orinasa efa misy.
Ny BASF dia handray ny ankamaroan'ny solika pyrolysis ary hampiasa azy io ho ampahany amin'ny fomba fandanjana betsaka ho toy ny tetik'asa fanodinana simika hamokarana azy ho vokatra simika vaovao. Ny vokatra farany dia ho an'ny mpanjifa amin'ny sehatry ny plastika izay mitady plastika avo lenta sy miasa mifototra amin'ny akora namboarina.
Ho fanampin'izay, mikasa ny hanangana zavamaniry pyrolysis kodiarana hafa i Pyrum miaraka amin'ireo mpiara-miasa liana. Ny sehatry ny fiaraha-miasa dia hanafaingana ny làlana hampiasa ny teknolojia tokana an'i Pyrum amin'ny famokarana betsaka. Ireo mpampiasa vola amin'ny ho avy amin'ity haitao ity dia afaka mahazo antoka fa ny menaka pyrolysis novokarina dia hositranin'ny BASF ary hampiasaina hamokarana vokatra simika avo lenta. Noho izany, ny fiaraha-miasa dia hanampy amin'ny fanakatonana ny tsingerin'ny fako plastika aorian'ny mpanjifa. Araka ny lazain'ny DIN EN ISO 14021: 2016-07, ny fako kodiarana dia fako plastika aorian'ny mpanjifa.
BASF sy Pyrum dia manantena fa, miaraka amin'ireo mpiara-miasa hafa, dia afaka manangana hatramin'ny 100 000 taonina ny herin'ny famokarana solika pyrolysis avy amin'ny kodiarana fako izy ireo ao anatin'ny taona vitsivitsy.
BASF dia manolo-tena hitarika ny fifindran'ny indostrian'ny plastika amin'ny toekarena boribory. Eo am-piandohan'ny rojom-bidy simika, ny fanoloana akora fôsily amin'ny akora azo havaozina no fomba lehibe indrindra amin'io lafiny io. Amin'ity fampanjariam-bola ity dia nanao dingana lehibe izahay tamin'ny fametrahana fotodrafitrasa lehibe ho an'ny solika pyrolysis sy fanomezana vokatra ho an'ny mpanjifa mifototra amin'ny fako plastika voaary simika.
Ny BASF dia hampiasa ny menaka pyrolysis an'ny kodiarana ho toy ny akora fanampiny ho an'ny menaka fako plastika mifangaro, izay ifantohan'ny fotoana maharitra amin'ny tetikasa fanodinana simika.
Ny vokatra vita amin'ny menaka pyrolysis izay mampiasa ny fomba fandanjana betsaka dia mitovy toetra mitovy amin'ny vokatra vita amin'ny fampiasana loharanon-karena fôsily lehibe. Ho fanampin'izay, manana dian-tongotra karbaona ambany izy ireo raha oharina amin'ny vokatra nentin-drazana. Ity no fehin-kevitra momba ny fanadihadiana momba ny Cycle Life (LCA) izay notontosain'ny orinasa consultation Sphera amin'ny anaran'ny BASF.
Ny famakafakan'ny LCA manokana dia afaka manaporofo fa ity toe-javatra ity dia azo ampiasaina hamokarana polyamide 6 (PA6), izay polymer plastika, ohatra, ho an'ny famokarana faritra avo lenta amin'ny indostrian'ny fiara. Raha ampitahaina amin'ny PA6 taonina iray novokarina tamin'ny fampiasana akora fosil, PA6 iray taonina novokarina tamin'ny fampiasana menaka pyrolysis pyrum ban amin'ny alàlan'ny fomba fandanjana faobe dia mampihena ny famoahana dioksidan'ny karbaona 1,3 taonina. Ny emissions ambany dia avy amin'ny fisorohana ny fandoroana kodiarana.
Navoaka tamin'ny 5 Oktobra 2020 tao amin'ny Life Cycle Analysis, Market Background, Plastics, Recycling, Tyres | Permalink | Fanamarihana (0)
Masinina fanodinana fako, Tyro Pyrolysis, Fanadiovana plastika maloto, Masinina fanodinana plastika, Fambolena Pyrolysis mitohy, Batch Pyrolysis Plant,